Maxkamadda Midowga Yurub waxay diidday mamnuucista faransiiska ee xashiishadda CBD ee Faransiiska gudaheeda • Dawooyinka Inc.eu
Maxkamada EU waxay diidday mamnuucida faransiiska ee ka ganacsiga CBD ee faransiiska
Ku saabsan mamnuucista CBD gudaha faransiiska, maxkamada cadaalada ee yurub waxay xukuntay in mamnuucidan lagu iibinayo kahortaga xashiishka loo yaqaan CBD ama cannabidiol waa mid aan sal lahayn. Tani waa sababta oo ah sheygu ma laha saameyn nafsaani ah ama saameyn ku yeelashada niyadda iyo cawaaqib xumo caafimaad. Dhowr dacwadood oo laga sugayo Faransiiska ayay u badan tahay in la joojiyo go'aanka Yurub kadib.
Cannabidiol ama CBD waxay ku soo galeen Faransiiska sanadkii 2018, iyadoo ay soo if baxeen daraasiin dukaanno ku takhasusay noocyada xashiishka ee aan ku jirin sharciga mukhaadaraadka.
Kadib rafcaan ay qaateen laba nin oo maxkamad ku taal Marseille ay ku xukuntay dambiyada daroogada ee ku saabsan suuq gaynta badeecada Kanevape ee dadka isticmaala sigaarka elektarooniga ah, garsoorayaasha Faransiiska waxay ogaadeen in sharciga maxalliga ahi aanu waafaqsanayn sharciga Yurub. Sidaas darteed maxkamadda racfaanka ee Faransiiska ayaa xukun u gudbisay maamulka Yurub.
Sébastien Béguerie iyo Antonin Cohen-Adad, oo dukumintiyada maxkamada lagu cadeeyay inay yihiin BS iyo CA, ayaa bilaabay shirkadooda sigaarka e-Cannavape ee Kanavape sanadkii 2014. Si loo soo saaro sigaarka elektiroonigga ah ee ugu horreeya ee laga helo CBD-da Faransiiska, waxay soo dhoofiyeen dhir hemp dabiici ah oo lagu farsameeyay Czech Republic ilaa Faransiiska, halkaasoo ay ku saleysnaayeen.
Si kastaba ha noqotee, shirkadda waxaa xidhay dowladda Faransiiska ka hor inta aysan xitaa albaabada u furin. In kasta oo ay tahay soosaaraha ugu weyn ee hemp ee EU, badankoodna loo beero dharka iyo waraaqaha, Faransiiska wuxuu leeyahay qaar ka mid ah sharciyada ugu adag EU ee ka dhanka ah xashiishka. Marijuana waa la mamnuucay oo CBD waxaa laga samayn karaa oo keliya abuurka iyo fiilooyinka geedka, looma baahna ubaxyada, waana inaysan noqon THC ku jira maaddooyinka nafsiga ah ee marijuana.
Béguerie iyo Cohen-Adad waxaa lagu xukumay daroogo sanadkii 2018, waxaa lagu xukumay 18 iyo 15 bilood oo xarig ah siday u kala horreeyaan, waxaana lagu xukumay inay bixiyaan ganaax dhan 10.000 oo Euro ($ 12.000). Labadooda ayaa racfaan qaatay maxkamada racfaanka ee faransiiska ayaa kiiska u gudbisay maxkamada cadaalada.
Diido mamnuucida CBD ee Faransiiska: Khatar ma leh, saameyn maan-dooriye ah
Maxkamadda ayaa la weydiiyay inay go'aamiso in sharci Faransiis ah oo xukumaya soo dejinta iyo suuqgeynta CBD ay jirto iyo in kale Faransiiska, si sharci ah uga koray wadamada kale ee EU, waxay ka soo horjeedaa xeerarka dammaanad qaadaya hal suuq oo Yurub ah. Suuqa gudaha ee Yurub, aasaaska Midowga Yurub, wuxuu hubiyaa in badeecadaha, raasamaalka, shaqada iyo adeegyada loo qaadi karo iyada oo aan xaddidneyn mid kasta oo ka mid ah Dowladaha Xubnaha ka ah. Laakiin waxaa jira waxyaabo ka reeban daroogada.
Diido mamnuucida CBD ee faransiiska: Khatar maleh, saameyn mukhaadaraad ma leh (afb)
Wax soo saarkoodu wuxuu ka koobnaa wax ka yar 0,2 boqolkiiba xarunta delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), taas oo siinaysa dadka isticmaala xashiishka daroogada sare, taas oo wali sharci darro ka ah uruurinta sare.
"CBD arrinta ka taagan dacwadaha ugu muhiimsan uma muuqato inay leedahay saameyn nafsaani ah ama saameyn waxyeello u leh caafimaadka aadanaha, iyadoo lagu saleynayo xogta sayniska ee la heli karo," ayay qoreen guddiga shanta garsoore.
ka Maxkamadda Yurub waxay xukuntay in Faransiisku ku xadgudbay sharciyada Midowga Yurub ee ku saabsan dhaqdhaqaaqa xorta ah ee badeecadaha isagoo diiday inuu iibiyo badeecad laga soo saaray dhir ka timid Dal kale oo xubin ka ah.
Go'aanka Khamiista wuxuu xaqiijinayaa talo ka timid qareen maxkamadeed horaantii sanadkan. Garyaqaanka Guud Evgeni Tanchev wuxuu bishii May qoray in badeecada Kanavape loo wareejin karo wadamada EU, maadaama CBD loo aqoonsan yahay mid daroogo leh.
Iyagoo tixraacaya la'aanta 'saameynta nafsaaniga ah ee la aqoonsan yahay' isla markaana xusaya in CBD 'wax yar ama aan wax saameyn ah ku laheyn nidaamka dhexe ee neerfaha', maxkamadda Luxembourg waxay xukuntay 'CBD looma kala saari karo mukhaadaraad. ''
Maxkamadda Sare ee Midowga Yurub waxay kaloo xukuntay in CBD aan loo xakamayn karin sida wax soo saarka beeraha maxaa yeelay looma tixgeliyo hemp ceeriin ah, maadaama aan la goosan, ama ay tahay 'xidid ama ku koray hemp' maxaa yeelay habka soo saarista ma kala soocayo fiilooyinka iyo geedka intiisa kale.
Ilaha ao Courthouse (EN), RFI (FR), TheGuardian (EN), Yahoo (EN)
CBDsaliid cbdgo'aan qaadashoEuropaFaransiiskaadhigauumi bixiyesharciga
CBD iyo hurdo: ma shaqeeyaa? Ma ammaan tahay? 8 dadka 10 waxay qabaan dhibaatooyin hurdo iyo hurdo la'aan.
Si lama filaan ah waa meel walba. Dadku waxay u isticmaalaan CBD ama cannabidiol hurdo, walwal, xanuun iyo kuwa kale oo badan ...
Mu'asasada WietOliePuur waa aasaas ku qanacsan in qof kasta oo aan laga caawin with